Dadka laga tirada badan yahay ayaa arka 'sinaan la'aan caado noqotay ayay sheegtay hayadda u xilsaaran sinaanta dadka ee Britain ee Watchdog - BBC News Somali
Dadka laga tirada badan yahay ayaa arka 'sinaan la'aan caado noqotay ayay sheegtay hayadda u xilsaaran sinaanta dadka ee Britain ee Watchdog
Dadka madow iyo kuwa laga tirada badan yahay ayaa wali arka sinaan la'aan caado noqotay dalkan Britain meelo badan oo ay ku jiraan waxbarashada iyo caafimaadka, ayay ka digtay gudiga loo xilsaaray sinaanta ee watchdog.
Warbixin ay soo saartay gudiga Equality and Human Rights Commision ee Britain, oo sidoo kale eegtay shaqooyinka, guryaha, mishaarka iyo garsoorka danbiyada, waxayna heshay 'sawir aad u xun'.
Dadka madowga ee ka qalan jabiyay jaamacadaha ayaa qaata qiyaastii 23.1% lacag ka yar qofka cadaanka, waxayna heshay in dad badan oo ah kuwa laga tirada badan yahay ay yihiin shaqo la'aan.
Dowladda ayaa sheegtay inay ka go'an tahay inay samayso "isbadal dadwayne oo dhab ah."
David Isaac, oo ah gudoomiya gudiga ayaa sheegay in warbixinta ay sheegayso, "wax laga walwalo oo isugu jira danbiyo nacayb oo kordhay markii Britain ay ka baxday Yurub iyo sinaan la'aan aan daacad ahayn oo waqti dheer jirtay iyo inaysan sinayn dadka qowmiyadaha kala duwan".
" Waa inaan kordhinaa dadaalkeena si aan wax uga qabano sinaan la'aanta dadka si dhaqso ah ama aan qatar u galno inaan aragno kala qaybsanaan dadkeena iyo xiisada inay kororto." ayuu ka digay.
"Hadaad tahay madow ama dadka laga tirada badan yahay ee ku nool Britain waqtigan casriga, waxaad dareemaysaa inaad ku nooshahay adduun kale, iskadhaaf inaad ka mid noqoto bulshooyinka qaranka ka kooban yahay".
Waxay xooga saaraysaa "sida ay wali u jirto caadada sinaan la'aanta", ayuu sheegay.
Gudiga oo sameeyay falanqayn cadaynta la soo helay, ayaa sheegay:
Dadka madow ee ku nool England ayaa saddex jibaar u nugul in la dilo marka la barbardhigo cadaanka.
Tirada dadka laga tirada badan yahay ee shaqo la'aanta ayaa aad u badan.
Shaqaalaha dadka madowga ee degree jaamacada haysta ayaa qaata 23.1% lacag ka yar kuwa cadaanka ee shahaadada haysta.
Dadka laga tirada badan yahay ayay u badan tahay in ay saboolnimo ku noolaadaan marka la barbardhigo dadka cadaanka ah.
Dadka laga tirada badan yahay ayaa wali aan ku badnayn shaqooyinka sare sida garyaqaanka iyo madaxa boliiska.
Dadka cadaanka ee saboolka ayaa sidoo kale wali ku jira nolol aan horumar lahayn, ayay warbixinta sheegtay.
Gudiga ayaa qiray inay jiraan meelo horumar laga gaaray, iyadoo sheegay in ay bateen xildhibaanada dadka laga tirada badan yahay, iyo dadka haysta shahaadada degreega ee jaamacada ee dhamaan dadka laga tirada badan yahay.
Laakiin Mr Isaac ayaa sheegay in istiraajiyada dowladda ee sanadihii ugu danbeeyay "wax yar marwalba iyo bilaabasho iyo joogsasho". Wuxuu ugu baaqay dowladda inay bilowdo qorshe buuxa ee sinaanshaha dadka " si loo dhiso bulsho siman oo meesha aan ka imaanay aysan ku xirnayn meesha aan gaarayno".
'Horumar dhab ah'
Gudiga ayaa ku taliyay in masuuliyada istiraajiyada in la hoos keeno hal wasiir.
Beegsiyo cusub si loo hormariyo fursadaha iyo waxa u qabsoomay dadka laga tirada badan yahay waa in la bilaabo,ayuu ku daray.
Dowladda ayaa sheegtay horumar dhab ah in la gaaray - iyadoo dadka madowga iyo dadka laga tirada badan yahay ee shaqooyinka haysta ay ugu badan tahay hadda shan iyo toban sano.
"Laakiin wax kaloo badan ayaa la samayn karaa, taas ayaana ah sababta aan u samaynayno barnaamij buuxa ee sinaanta oo loogu tala galay shaqada, jaamacada la helayo, tababarka shaqooyinka, iyo ammahyo ganacsi lagu bilaabo iyo shaqooyinka boliiska iyo milatariga" ayay sheegtay afhayeenka dowladda.